Maxaa u qabsoomay R/wasaare Khayre iyo Safarkii Washington oo uu Soo Afmeeray | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Maxaa u qabsoomay R/wasaare Khayre iyo Safarkii Washington oo uu Soo Afmeeray
Apr 15, 2019 - 5 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Raisul Wasaaraha Xukuumada federaalka Somalia Xasan Cali Khayre iyo wafdigii uu horkacayey ayaa soo gebagabeeyey safar shaqo oo uu maalmahan ay ku joogeen magaalada Washington ee dalka Maraykanka.
Khayre iyo wafdigiisa ayaa ka qeyb gelay shirka sanadkiiba ay mar iskugu yimaadaan hay’adaha Maaliyadda dunida, iyadoo sanadkaan uu jiray qeyb u gaar ah Soomaaliya oo lagu gorfeeyey dhaqaalaha Soomaaliya iyo sida dunidu uga qeyb qaadan karto.
Ra’iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa intii uu joogay magaalada Washington waxa uu kulan kula qaatay Madaxweynaha cusub ee Bangiga Adduunka, David Malpass, iyagoo ka wada hadlay dardar-gelinta howlaha dib-u-habeynta hay’adaha dowladda iyo kaalinta uu bangiga adduunku ka geysanayo.
Ninka aad adkayso ee albabka gariga laga furayo
Waa raisalwasare XASAN ALI KHAYRE wa halyeey
Sharaf u yeelay dalkiisa iyo dadkiisa KARTI. IYO
HUFNAAN wa hogamiye meel maray hadad ku
Farxayso somali ciduu ka yahay waa HAWIYE ka si
Ah MURURSADE maalqaben ah tageer ninkaada
Meel marka adoo kor u qaadaya sharaftiisa. LOL
Hora losocinaya insha alaah guuuul iyo gobanimo
Kuwi markay arkaan horumarka somaaliya xanaaqi jiray
Kiniinka dhiigkarka halaqaan indhahana haka qarsaden
Labada arin oo aan kalaheyn in Mr Farmaajo uu horjooge ka noqdo Villa Xamar waxey aheyd.
1. Inuu reer Qurac ka soo dejiyo geedaha, taas waa lagu guuleystey oo maanta waa ayagaas leh Xamar waa nabad, horey waxey u dhihijireen ka warama Qarixii Xamar ( Guno Bilaash ah ayaa dadka u daran)
2. Inuu ka soo reebo Federaal beeledkii uu Meles u soo dhiibey taas wuu ku guuldareystey, xataa wuxuu ku fashilmey inuu halkii ka sii wado – heshiiskii 6 bilood laha ahaa ee Dekeddda Kismaayo
Sidaas daraadeed waxaa soo vaxdey inuu, RasalwasaareKheyre fuliyo Amaraduu fulin jirey Xassan Shiikh,
Madaxweyne Farmaajo iska jiifo sidii Rasalwasaare Saacid.
– ilaa ay wada hadlahayaan Hargeysa iyo Muqdisho oo Qarankii lagu heshiiyey 60kii dib loo saxahayo, Xamar waa laga xamaalankaraa laakiin lama wada sheegan karo.
Qoys aan Aabo iyo Hooyo laheyn maahan Qoys buuxo,
Xamar iyo Hargeysa oo aan mideysnayna ma jiro Qaran Buuxo.
– Nin Qaran buuxo ayaa u muuqdo, nin Labo Gaaweeto ayaa u daran.
Dowlada federalka markii la yagleelay casimada
Waxaa haystay 3 awodow oo midka ugu xooga
Badan uu qarsoona
1 xagjiriin awood lahaa lakiin qarsona
2 hogaamiye. Kooxedyo awood lahaa
3 shaqsiyad dhaqaale haysta o caqabad aha
Walow la fashiyey oo laga saray casimada xagjirintii
Weli waa awood jirta oo somalia samayn ku leh
Lakiin maanta maleh baro cidan oo loogu hagaago
2019 dowlada faderalku waxay aragtay QATARTA
ay yelan karan 3 daas awododod ardaydoda hadii
Ay fursad helaan ayna wiiqi karaan qarankan
Dhismaya marka mudnanta 1,aad 2aad iyo 3aad wa
Amniga muqdisho NOT somalia